2017 | အ င်္လ ကာ ည
10 Great Alternatives to “Good”
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး တစ်ခု စတင်ကြရာဝယ်..
Admin တစ်ယောက်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မည်ဆိုလျှင်
Come Here.....Goes There
11:16 AM | Labels: လေ့လာစရာ အင်္ဂလိပ်စာ
If you’re an ESL (English Second Language) student who wants to improve their English vocabulary, this post is for you.
အမြဲတမ်း "Good" စကားလုံးတစ်ခုတည်း တွင်တွင် အသုံးပြု ပြောဆိုနေတာ ငြီးငွေ့နေ့ပြီလား???
"Good" နေရာမှာ အချို့စကားလုံးအသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးအသုံးပြုကြည့်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါလား...
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ စကားလုံး(၁၀)လုံးက "Good" စကားလုံးကို အစားထိုးပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Vocubulary list တွေပါ။ လေ့လာကြည့်ရအောင်.....
In addition to being used to describe - temperature, “cool” also means very good or fashionable.
Cool စကားလုံးကို အပူချိန်နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့အနေထားမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်သလို အခြားနည်းအားဖြင့် အရမ်းကောင်းတယ် / ခေတ်မှီတယ် ဖက်ရှင်ကျတယ် အစရှိသဖြင့်လည်း ပြောဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
you might describe stylish clothes as “cool” oraperformance byamusician that you really enjoy.
It can also be used to express acceptance when someone makesasuggestion. For example, if someone suggests meeting to go toamovie, you could say “Cool! I’ll see you at 6pm”.
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို တစ်ခုခုလုပ်ဖို အကြံပြုပြောဆိုတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ "လက်ခံတယ်/လက်သင့်ခံနိုင်ကြောင်း" ပြန်လည်ဖြေကြားတဲ့အချိန်မှာလည်း "Cool" ကို အသုံးပြုပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကို ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ချိန်းဆိုတဲ့အခါ -- သင့်အနေနဲ့ "Cool! I will see you at 6pm. ဒီလိုပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
Like “awesome”, “cool” isapopular expression for younger people, and you shouldn’t use it in more formal conversations.
(Note: - awesome, cool အစရှိသည့် စကားလုံးတွေက လူငယ်တွေကြားမှာ အသုံးများတဲ့ Expression တွေဖြစ်ပါတယ်၊ Formal Conversation တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ )
“Excellent” is used to describe - something very good or of high quality.
တစ်စုံတစ်ခု အဲ့ဒီတစ်ခုက အရည်အချင်း အမျိုးအစား ကောင်းတယ် ဆိုရင် "Good" အစား "Excellent " ကို အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
It can be used when speaking to friends, family, or coworkers when you want to emphasize that something is not just ok or good, but very good.
မိသားစု ၊သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ စကားပြောဆိုတဲ့အခါ တစ်စုံတစ်ခု ကို အလေးထား ပြောဆိုဖို့လိုတဲ့အခါ Ok, Good အစား "Excellent " ကို အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
“how are you”, လို့ မေးလာတဲ့အခါ
“excellent”. လို့ တုန့်ပြန် ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
“Have you been to the new restaurant downtown? The food there is excellent”.
“Wonderful” means - great or very good. ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ် အရမ်းကိုကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ စကားနေရာမျိုးမှာ “Wonderful” ကို အသုံးပြု ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
People can be wonderful, (လူပုဂ္ဂိုလ် )
experiences can be wonderful(အတွေ့အကြုံ)
and things can be wonderful. (အရာဝတ္တု တွေ) အစရှိသည် တို့ကိုလည်း Formal & Casual နှစ်မျိုးစလုံးမှာ “Wonderful” ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြု ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
You can use this word in both formal and casual settings.
“The paintings at the art exhibition last night were wonderful”,
“I think you’ll like her. She’sawonderful person”.
အခြေအနေတစ်ခုမှာ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီနေတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိအောင် ကောင်းနေတာမျိုး မှာ "Perfect" စကားလုံးကို "Good" အစားအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
If you haveavery good day and everything happens exactly as you want it to, you could describe it asa“perfect day”.
A hotel could be “perfect for families”
If someone suggests an idea that you like, you can say “That’s perfect” or “That sounds perfect”.
လူတစ်ဦးက သင့်ကို စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေ အကြံပြုတဲ့အခါ ဒီအကြံဉာဏ်တွေကို သင် သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ That’s perfect” ဒါမှမဟုတ် “That sounds perfect” လို့ ပြောဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
The world “fantastic” is used to describe something very good or exciting.
တစ်စုံတစ်ခု က အလွန်ကောင်းတယ် သင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာ တစ်ခုခု ဖော်ပြပေးတယ်ဆိုရင် "Good" အစား Fantastic ကို အသုံးပြု ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
if someone asks you about your trip to Thailand, you could say “It was fantastic!”
(It can be used in both formal and informal situations.)
It’savery enthusiastic,
so you should say it with some emphasis or exclamation. တစ်စုံတစ်ခုကို အံ့အော် မှင်တတ်မိတယ် / အလေးထား ပြုမူပြောမိလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း အလားတူ စကားလုံးကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
10:11 AM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
Forgive to all weakness people ,
do not bring them to your brighter future.
Personal Attack တွေ
မဟုတ်မမှန် သော မကောင်းသတင်း လွှင့်မှုတွေ
"သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်း" တဲ့
ကိုယ်ဝမ်းနာတာ ကိုယ်သာပဲ သိသလို
စေတနာအရင်းခံနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ကျတယ် အပင်စိုက်ပြီး အချိန်တန်သူ့ဟာသူ ပွင့်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ပြီးစလွယ် ပြစ်မထားတက်ပါဘူး
မစိုက်ပျိုးနိုင်ရင် အစကတည်းက မျိုးစေ့မချပါနဲ့
2:11 AM | Labels: ဆောင်းပါး
9:39 AM | Labels: ဆောင်းပါး
အချိန်ဆိုရင် အရမ်းကို ပင်ပန်းလှပါတယ်။
ပညာမတတ်သူတွေလိုလည်း ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့
အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ငယ်တဲ့အချိန်တုန်းက မိဘထောက်ပံ့ပေးနိုင်သလောက် ပညာတွေသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။
ပညာတတ်မှ အေးအေးနေနိုင်မှာလို့ စိတ်ထဲ အမြဲတွေးဖြစ်တယ်
ခုလည်း ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရပ်မနေပါဘူးလေ....
အလုပ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ဘာတွေဆက်လေ့လာရမယ်ဆိုတာ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် တက်လှမ်းနေရတာပါပဲ၊
မိတ်ဆွေ အကိုဆရာ တစ်ယောက် ပြောဘူးတယ်
ဒီလိုပုံစံနဲ့ တော့ အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုတော့ လိုတယ်လေ
ဒီတော့ သူများတွေလို မလုပ်နိင်တော့
ခု အတတ်ပညာကို ဥိးစားပေးပြီး ဉာဏ နဲ့ လုပ်တဲ့နေရာမှာငါအလုပ် လုပ်နေတယ်
လစာ ဘယ်လောက်လဲဆိူတာ မင်းသိပြီးသားပါ ဆိုပြီး ပြောခဲ့ဖူးတယ်
အသိဉာဏ်ကို အသုံးချပြီး လုပ်ပါ
ဟုတ်ပါတယ် သူတကယ်ပဲ လစာကို ဆယ်ဂဏန်းအထက် လစာရပါတယ်
တစ်ခြား နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေကလည်း ကမ်းလှမ်းခံရပါတယ်
ဒါက သူရဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်အခါမှာ တစ်စိုက်မက်မက် လေ့လာသင်ကြားခဲ့တဲ့ ပညာတွေကြောင့်ပါ
Practice make perfect ဆိုတဲ့အတိုင်း အကြိမ်ကြိမ်
လေ့ကျင့်မှုတွေ အဆက်မပြတ်လုပ်နေမှပဲ အကောင်းဆုံးအရာတွေကို ရရှိမှာပါ၊
ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုတွေကို ရဖို့အတွက် အလုပ်ထဲမှာပဲ အတွေ့အကြုံရဖို့ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ ပြန် အသုံးချမှ ကျွမ်းကျင်မှုရှိလာမှာပါ....
အခု စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်
ကာယ နဲ့လုပ်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို ရွေးချယ်မှာလား?
ဒါမှမဟုတ် ဉာဏ အလုပ် လား?
ကိုယ်က ဘယ်လိုအတတ်ပညာတွေ တတ်မြောက်ထားလဲ
ကိုယ်ခန္ဓာအင်အားကိုအသုံးချပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ် လုပ်မှာလား
>ဝေးသွားတဲ့နေရာကို ပြန်လိုက်နေရင်လည်း မောပါတယ်
လက်ရှိနေရာကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာကို ဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါ
ပညာကို တန်ဖိုးထားပါ လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ....
6:54 PM | Labels: ဆောင်းပါး
6:29 AM | Labels: ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်
တစ်နေ့ သူ မလိုအပ်တော့တဲ့
"ဂျင်း" နဲ့ "ငရုတ်သီး" ပေါင်းပြီး
6:10 PM | Labels: ဆောင်းပါး
"Come Here …Goes There"
ဆိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ကျနော်ပျင်းပျင်းရိရိနဲ့ စားသုံးသူ အလာကို စောင့်နေပါတယ်
ချက်ပြုတ်လည်း ကျနော်ပါပဲ …………………………….
ဆိုင်မှာ နေ့လည်နေ့ခင်းအချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် ဆိုင်ထဲမှာ ခြောက်သွေ့နေပါတယ်
ဆိုင်မှာ နေ့လည်နေ့ခင်းအချိန်ညံ့လို့လားမသိ၊ တစ်နေ့တစ်နေ့ စားသုံးသူကိုမမျှော်ရတဲ့ နေ့ရယ်လို့မရှိ။
ဒီနေ့ လည်း စားသုံးသူအလာကို ငိုက်မြည်းချည်းများစွာနဲ့ စောင့်နေပါတယ်
"ကျွီ…………… "ဆိုတဲ့ အသံ
တံခါး ဖွင့်သံကြားလို့ ကျနော် ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်
"ကြက်အသည်းအမြစ် နှစ်ပွဲ ဗျာ ….ရလား"
အင်းပြီးတော့ "၀က်သားတစ်ပွဲ ငါးကြော်နှပ်တစ်ပွဲနဲ့ ….ထမင်းပါပေးဗျာ"
ဒီလိုဆို ဘီယာ လေးလုံးအရင်ချဗျာ ငါးမုန့်ကြော် နဲ့…….
ကျနော်လည်း ဘီယာ ချပေးပြီး ဟင်းပွဲအတွ့က် အလုပ်ရှုပ်သွားတာပေ့ါ
ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲ ပျော်နေတယ် ပြီးရင် သူတို့ စားတာ ဘယ်လောက်ကျလဲကျနေ်ာတွက်ကြည့်ရဥိးမယ်
တော်တော်တော့ များမှာ ဟဲ…..ဟဲ စိတ်တွေးပေါ့
အဲ့ဒီနောက် ချသင့်တာတွေချပေးပြီး ကျနော်လည်း ကောင်တာ ပြန်ထိုင် ပြီး စားသောက်ထားတာကို တွက်နေတာပေါ့ (မဆိုးဘူးဗျ နှစ်သောင်းလောက်ရှိနေပြီ……)
အော် လောဘ …လောဘ
အဲနောက် ဆေးလ်ိပ်သောက်ရင်း စကားပြောနေကြတယ်
သူတို့နှစ်ိယောက် ပြောနေတာကို လည်း ကျနေ်ာလည်း နားစွင့်ကြည့်နေရင်း
"ဆိုင်ရှင်က မလုပ်နိုင်ပါဘူးဗျာ" ဆိုပြီး အသက်ငယ်ငယ်လူငယ်က ပြောတာ ကြားလိုက်တယ်
အကြီးတစ်ယောက်ကလည်း "အာ ဒါလေးက လွဲလွဲလေးပါ သူ မလုပ်နိုင်စရာမရှိပါဘူး"
အဲ့ဒီလိုပြောနေကြတော့ ကျနေ်ာလည်း မနေနိုင်ဘူး
"ဆိုင်ရှင်" ဆိုတဲ့ ကျနော် နာမည်လည်းပါတာကို……ဟဲဟဲ
ဒီမှာဗျာ…..ကျနေ်ာညီလေးက ပြောတယ်"ဟော…ခင်ဗျားဆိုင်ထဲက နာ၇ီကို တွေ့လား….."
အင်း အဲ့ဒီနာ၇ီက ကျနော်အဖိုးဂျပန်သွားတုန်းက ပါလာတဲ့ နာ၇ီပေါ့
( ကြုံတုန်း ကျနေ်ာလည်း နာ၇ီလေးကို ကြွားလိုက်တယ.် )
သူက ဆက်ပြီး.......နာရီ ဟိုဘက်ဒီဘက် လွှဲနေတာကို တွေ့လား”
"တွေ့တာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့လဲ.? "
ခင်ဗျားအနေနဲ့ နာရီရှေ့မှာရပ်ပြိး တစ်နာရီလောက် နာရီလွှဲနေတာကို
ညာလွှဲရင် ညာလွှဲ ဆိုပြီး
ခင်ဗျာ ရေတွက်နိုင် / မနိုင် ……..
ကဲ ဒါဆိုလည်း လောင်းကြေးထပ်မယ်ဗျာ
ကျနေ်ာက အဲ့ဒါနဲ့ တစ်သောင်းလောက်လုပ်ပါဗျာ…………
အာ နည်းတာပေ့ါ လို့ သုံးသောင်းလောက်တော့ လုပ်လိုက်ဗျာ လို့……………
ကျနေ်ာလည်း ဘာလို့ မလောင်းရဲရမှာလဲ ဆက်လောင်းတာပေါ့ ဒီလောက်လွယ်တာကို.ဟဲ…ဟဲ
အဲ့ဒီတော့ ငွေတွေထပ် ပြီးတော့ ဘယ်သူလက်ထဲအပ်မလဲ…
သူရဲ့ ညီကလည်း ငွေသုံသောင်းထုတ်ပြိး သူ့အကိုလက်ထဲ ထည့်တယ်
ခင်ဗျားအနေနဲ့…………….နာရီရှေ့မှာ ရပ်ပြီး တစ်နာရီ မှန်မှန်ရေတွက်နိုင်ရင်……ခင်ဗျာနိုင်တယ်
တကယ်လို့ ခင်ဗျာလှည့်ကြည့်ရင် ရှုံးတယ်နော်..
အဲလိုနဲ့ (၃)ဦးသား နာရီ ရှိတဲ့နေရာကို လျှောက်တယ်
ကျနေ်ာက သူတို့(၂)ယောက်ကို ကျော်ပြီး နာရီရှေ့မှာ ရပ်လိုက်တယ်….
အဲ့ဒီအချိန် အငယ်ကောင်က အချိန်စမှတ်တော့တာပဲ
အနောက်က ညီအကို နှစ်ယောက်ရဲ့ အသံလည်းမကြားရတော့ဘူး
ကျနေ်ာ မရပ်ရဲဘူးလေ………ရပ်ရင် ကျနော် ရှုံးသွားမှာပေါ့
ကျနေ်ာ လှည့်ကြည့်လို့လည်းမဖြစ်…. စိတ်ကလည်းရေတွက်နေရတယ်
ဟေ့လူ ခင်ဗျား ဘာရပ်လုပ်နေတာလဲ နာရီရှေ့မှာ…
ဟိုကောင်နှစ်ယောက်လည်း ဘာလို့ ၀င်ဖြေရှင်းချက်မပေးတာလဲ..
အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း စိတ်အေးလက်အေးပြန် ရေတွက်တယ်
အကို ဘာလုပ်နေတာလဲ ………………တစ်ယောက်ထဲ …စိတ်ကိုထိန်းဦးလေ ….(ကျနေ်ာကိုတော့ သူတို့ မထိကြဘူးဗျ ….တစ်ခုကံကောင်းတယ်)
ကျနေ်ာရှေ့မှာ မိန်းမက လာရပ်တယ်…. အကို ဘာဖြစ်နေတာလဲ မိန်းမကိုပြောလေ အဲလိုမျိုးလျောက်မလုပ်နဲ့လေ….စိတ်ကိုထိန်းပါအကိုရ….
ကျမ ယောကျာ်းဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး………ဟီး……..ဟီး ငိုသံနဲ့ မိန်းမရဲ့ ငိုသံကြောင့် နောက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေေ၇ာက်လာကြတယ်ထင်တယ်ဒီလူ ရူးများသွားပြီးလားမသိဘူး
ကျနေ်ာလည်း ဒေါသ ထွက်လာတယ်
ဒီလောက်ဖြစ်နေတာကို ဟို(၂) ကောင်ဘာမှမပြောဘူးပေါ့လေ
အဲ့ဒီအချိန်မဖြစ်ဘူးဗျ…..သူတို့ကို ချုပ်ပြီး ဆေးရုံပို့ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်
ကိုးဆယ်ိတစ်။။ ကိုးဆယ်နှစ် ။။။။ကိုးဆယ့်သုံး…..ကိုးဆယ်လေး ကျနေ်ာမှန်မှန်လေးရေတွက်နေတယ်
ပြီးတော့မှာကို ကျနေ်ာက ဘယ်သူမှလာမကိုင်ကျနဲလို့လည်းစိတ်ကလည်းဆုတောင်းနေရတယ်
ကျနေ်ာနိုင်တော့မှာကို နိုင်ရင် ပိုက်ဆံရတော့မှာ
ကျနော် စိတ်ကူးနဲ့ ပျော်နေတာ
နိုင်ပြီ.ကွ နိုင်ပြီ။။။။။။။။။။။။ဆိုပြိး အော်ရင်း လှည့်လိုက်တော့
ကျနော် ကို ၀ိုင်းကြည့်နေကြတဲ့လူတွေ မနည်းပါလား…အာလားးးးးးးးလားးး
ဘယ်အချိန်ထဲက ထွက်သွားမှန်းလည်းမသိဘူး ကုန်ပြီ ကုန်ပြီ……………………..
ကျနေ်ာအော်ရင်း အော်၇င်း ရင်ထဲဆို့သွားတယ်………….. ပါးစပ်က စကားထွက်မလာတော့ဘူး
စားသောက်တာရယ် လောင်းကြေးထပ်တဲ့ ငွေသုံးသောင်းရယ် အားလုံးပေါင်းရင်
နှမြောတဲ့လူ နှမြော နဲ့ ဖြစ်ကုန်ကြလေရော
ကျနော်လည်း ခပ်ရှက်ရှက်နဲ့ နာရီကြီးကို ဖြုတ်ပြီး
ဒီလောက်တောင် ဖြစ်လှတဲ့နာရီ ရော့ သွားလေေ၇ာဟဲ………………… ဆိုပြီး
စိတ်နာနာနဲ့ တစ်ခါတည်း ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တော့တယ်
လောကမှာ ဘာတစ်ခုမှ လွဲလွဲမရနိုင်သလို။…………………
ကိုယ့်ထက် လည်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်လည်း ကြိုမသိနိုင်ဘူး